Alto's Adventure Yakaderedzwa uye Yekutanga Muenzaniso weAlto's Odyssey | IPhone nhau
Alto's Adventure yave mumwe wemitambo yakakosha pane iyo App Store mune yayo chaiko. Mukundi wemubairo wakawanda, unorumbidzwa nevatsoropodzi nevashandisi veIOS neApple, iri nyore asi inonakidza "Endless Runner" inoenderera ichitsvaga ratidziro yekudzokorora mushure mekuvandudza mumakore ayo maviri apfuura, uye kupemberera chiitiko ichi vagadziri vaiisa Pari kutengeswa pane App Store kwenguva shoma. Unogona kudhawunirodha kwenguva pfupi kwe € 1,99 chete, mutengo mejor iyo chete yemutambo unovimbisa iwe maawa mazhinji evaraidzo uye kuti iwe zvakare unowanikwa kune iPhone, iPad uye kunyangwe yeApple TV. Sechikonzero chechirangaridzo ichi vanotipawo vhidhiyo nekapfupiso kekuchave kuzoburitswa kwavo kunotevera: Alto's Odyssey
Uye ndezvekuti pane dzakawanda nguva hazvidiwe kuve neyakaomarara mitambo makanika kana yakanyanya chaiyo 3D mifananidzo yemutambo kuti ubudirire. Alto's Adventure inovaka mukurumbira wayo pane yakatarisana: mutambo uri nyore wekubata, uine akareruka magiraidhi asi panguva imwechete zvakanyatsotsanangurwa, ine yakanakisa kurira uye yekuona mhedzisiro, mimhanzi inozorodza, uye pamusoro pezvose mechanic yemutambo inoita kuti ive imwe yeanonyanya kukosha mafomu eiyo iPhone yako anogona kutambwa chero nguva isina basa yezuva. Uye zvakare, vagadziri vayo vagara vachitarisira yavo yekuvandudza mukati memakore aya, vari vekutanga kusvika Apple TV uye kushandisa nyowani haptic injini yeiyo iPhone 7.
Pamusoro pekutengeswa kweAlto's Adventure, vaida kupemberera zuva rekucherechedza mutambo wavo wekuratidzira nekuratidzira diki diki rekuburitswa kwavo kunotevera: Alto's Odyssey. Ichi chikamu chechipiri, icho kubva pane zvishoma zvatinoona zvichachengetedza zvakafanana nemutambo wepakutanga, uchasvika muzhizha rino pane edu zvishandiso, uye isu hatizive parizvino kuti ndedzipi shanduko dzichaunza zvine chekuita neshanduro yekutanga, asi zvirokwazvo kusvikira panguva iyoyo isu tine mamwe mafambiro mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Alto's Adventure yakaderedzwa uye yekutanga kuravira kweAlto's Odyssey
CCWallCustomizer inotibvumidza isu kuti tichinje iyo kumashure kweControl Center